OpenDroneMap: drone mapping software yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Ichi chakavhurika sosi chishandiso ichagadzirisa mifananidzo yakatorwa nedrone makamera uye voishandura kuita matatu-mativi enzvimbo yedhata yenzvimbo, kugona kushandisa aya mepu kune mamwe mabasa. Naizvozvo, kana iwe uine drone ine kamera, unogona kutora mukana we software iyi kugadzira izvo zvinomiririra zviri nyore kwazvo.
ODM kana OpenDroneMap ine akati wandei zvishandiso kukwanisa kuita izvi kugadziriswa kwemifananidzo yakatorwa neyakavhenekerwa civil drones. Mhedzisiro yacho ichave inoshanda kune anonongedzera makore, edhijitari pamusoro mamodheru, akagadzirwa manyorerwo edhijitari pamusoro mamodheru, mifananidzo yakasarudzika, mhando dzekumusoro kwedhijitari, nezvimwe
Uye, kunyangwe ichigona kuwanikwa mune zororo re Ubuntu uye muchitoro cheUbuntu Software, sezvo OpenDroneMap yakavakirwa Ubuntu, inogona zvakare kumhanyisa kune mamwe mapuratifomu ichishandisa Docker.
Zvakare, kunyangwe iri yekuraira turu chishandiso, kana iwe uri mumwe wevasingade kushanda neiyo terminal uye uchida chimwe chinhu chinonzwisisika, iwe unofanirwa kuziva kuti pane chimwe chinonakidza chirongwa chaunoshanda nacho kubva graphical mushandisi interface. Kuti uite izvozvo, unogona kuenda kune WebODM. Iyi purojekiti zvakare yakavhurwa sosi uye yemahara, uye iwe unayo iyo inowanikwa kubva kune yako GitHub saiti.
WebODM haisi chete graphical app, zvakare inokupa iwe API nyore kushandisa uye kuwedzerwa kwekugadzirisa dhoni dhizaini. Ehezve, inoenderanawo neMicMac (izvi zvakawedzerwa munguva pfupi yapfuura uye zvaive muchikamu chekuyedza).
Mamwe mashoko - OpenDroneMap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » OpenDroneMap: drone mapping software